Maxaa dhexmaray Kante Iyo Griezmann Kaddib Guushii Champions League-ga? – Garsoore Sports
Maxaa dhexmaray Kante…
Maxaa dhexmaray Kante Iyo Griezmann Kaddib Guushii Champions League-ga?
Cayaaryahanka khadka-dhexe ee kooxda Chelsea, oo door muhiim ah ka qaatay in xulkiisa Faransiiska ay ku guuleysato FIFA World Cup seddex sano kahor, ayaa koob kale ku daray keydkiisa koobabka ee sii kordhaya Sabtidii, isagoo door muhiim ah ka cayaaray kulankii ay Blues 1-0 kaga adkaatay kooxda Manchester City ee Fiinalka UEFA Champions League.
N’Golo Kante wuxuu raadin doonaa inuu sidoo kale keydkiisa ku darsado Koobka Qaramada Yurub marka uu qeyb ka noqonayo xulkiisa Faransiiska ee tartanka Euro 2020 dabayaaqada bishan.
Laakiin Kante ma noqon doono halyeeyga kaliya ee tababaraha Faransiiska Didier Deschamps uu ku tashan doono xagaagan, iyadoo xulkiisa ay buux dhaafiyeen magacyo tayo sarre leh waxaana kamid ah weeraryahanka Barcelona Antoine Griezmann.
Kahor inta aysan Faransiiska bilaabin isdiyaarintoodii ugu dambeysay ee Euro, xulka ayaa la kulmay labada ciyaaryahan ee Chelsea Olivier Giroud iyo N’golo Kante waxaana lagusoo dhoweeyay gacmo furan iyo fariimo hambalyo ah oo ay ka heleen saaxiibadood qaranka kaddib guushii Champions League-ga.
Markii uu yimid xaruntooda, Kante waxaa soo si wanaagsan usoo dhoweeyay Antoine Griezmann, kaasoo si deg deg ah gacmaha ugu duubay saaxiibkiis, uguna hambalyeeyay ku guuleysiga Champions League-ga
Ciyaaryahanka Barcelona ayaa yiri: “Bravo champion! Hambalyo. Ma fiicantahay?”
Waxay taasi cadeeyneeysaa sida uu Kante caan uga dhexyahay asxaabtiisa Qaranka iyo qof walba.
Isagu waa hoggaamiye la jecelyahay, maxaa yeelay wuxuu udub-dhexaad u yahay bandhigyada kooxdiisa Chelsea iyo sidoo kale xulkiisa Faransiiska.
Isagoo ka jawaabaya sheegashooyinkaas, Kante wuxuu yiri: “Waa wax la yaab leh. Waa natiijada dadaal badan.”
“Waxa ugu muhiimsan waa shaqada ay qabanayaan kooxda oo dhan. Waa qab iyo farxad.”
N’golo Kante ayaa ku qasbanaan doona inuu tayadiisa ku riixo meesha ugu sarreysa Tartanka Qaramada Yurub, iyadoo Faransiiska ay ka dhex muuqaneyso guruubka F oo lagu tilmaamay guruubka dhimashada ee tartanka, waxaana ku qeyb ka ah xulalka Jarmalka iyo Portugal.
Liverpool : Saul Niguez Oo Lala Xiriirinayo Inuu Ku Biiro
Conte Oo Wadahadallo Kula Jira Tottenham Hotspur